HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 16:11 yesterday to 18:51 yesterday, HD Digital TV Off Air from 16:11 yesterday to 18:51 yesterday. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 16:11 on 05 Dec to 18:51 on 05 Dec, HD Digital TV Off Air from 16:11 on 05 Dec to 18:51 on 05 Dec. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 15:38 today, HD Digital TV Off Air from 15:38 today. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 15:38 today to 17:34 today, HD Digital TV Off Air from 15:38 today to 17:34 today. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 15:38 yesterday to 17:34 yesterday, HD Digital TV Off Air from 15:38 yesterday to 17:34 yesterday. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 15:38 on 07 Aug to 17:34 on 07 Aug, HD Digital TV Off Air from 15:38 on 07 Aug to 17:34 on 07 Aug. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Possible service interruptions [DUK]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 11:17 today to 11:20 today, HD Digital TV Off Air from 11:17 today to 11:20 today. [BBC] Possible service interruptions [DUK]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 11:17 yesterday to 11:20 yesterday, HD Digital TV Off Air from 11:17 yesterday to 11:20 yesterday. [BBC] Possible service interruptions [DUK]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 11:17 on 13 Sep to 11:20 on 13 Sep, HD Digital TV Off Air from 11:17 on 13 Sep to 11:20 on 13 Sep. [BBC] Possible service interruptions [DUK]